Wasaaradda arimaha dibadda oo isha ku heysa xaalada Masar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciid reer Iswiidhen ah oo ku waxyeeloodey ma Jirto
Wasaaradda arimaha dibadda oo isha ku heysa xaalada Masar
La daabacay torsdag 15 augusti 2013 kl 14.10
Boqolaal qof ayaa la warinayaa in ay ku naf waayey rabashadahii shaley ka dhacey dalka Masar. Ilaa iyo hada lama soo sheegin ruux reer Sweden ah oo ku waxyee loobey rabshadahaas, sida ay noo sheegtey wasaarada arimaha dibada UD. Laakiin wasaarada ayaa la filayaa in ay ka soo saarto talooyin degniin ah oo loo jeedinayo dadyowga u socdaalaya dalka Masar.
Charlotta Ozaki Macias waa madaxa warfaafinta wasaarada arimaha dibada.
- Wax macluumada ah oo la xiriira dad reer Iswedhen oo oo waxyeelo soo gaartey ma jiraan. Ku dhawaad 800 oo Iswedhis ah ayaan liis ku heynaa in ay Masar deganyahiin, sidoo kale 500-600 oo dalxiis yaal ah ayaa jira sida ay muujineyso macluumadka xaafiisyada safarada, ayey tiri.
Wasarada arimaha dibada degniinteeda la xiriirta dadka u socdaalaya Masar waa sidee laakiin waxaa dhici karta in wax laga badalo, ayey leedahey Chalotta Ozaki Macias.
- Waxaa sideeda ahaan doonta digniintii aan horey u soo saarney dhowr bilood oo hore, dignaantaas oo aheyd in aysan dadku ku tageyn socdaal dalka Masar hadii ay ka marmaan socdalkas, inkastoo degniinteena ay ay ka baxsaneyd dadka transitka ku maraya garonka diyaaaradaha Qahiro iyo meelaha dalxiis ee ku yaala badda cas. Waxan rabaa in aan sheego in wasaarada hada ay ka baaran deggeyso xaalada, maanta ayaan fileynaa in helno sawir guud oo ku sabsan sida ay wax u socdan dalkas iyo waxa ay waddamada kale sameynayaan. Waxaa jira aas'aas aan u cuskano markaan dooneyno in aan isbadel ku sameynop heerka digniinaha, marka waa suurto-gal in aan wax ka badalno, ayey tiri.
Safaaradaha iyo konsulatka Iswedhen ayaa waxaa maanta ka jira diyaar garow wax qabad hadii xaalada sidaan ka sii darto oo lagu qasbanaado in dadka Iswedhisha ah laga soo daar gureeyo, sida ay sheegtey Challota Ozaki Macias madaxa warwaafinta wasaarada arimaha dibadda. Laakiin wasarada ayaa arinta indhaha hada ku heysa inkastoo aysan hada jiren qorsho dadka Iswedhsika dalkaas looga soo daad gureynayo.